Okonkwo ọ bụ odogwu? - Cheta Nwanze - Njenje Media News
Home Culture Okonkwo ọ bụ odogwu? – Cheta Nwanze
Ubọchị ole na ole gara aga, agbaara m ntuli aka na Twitter, na-ajụ maka Okonkwo na Akwụkwọ nke a na akpọ Things Fall Apart. Ọ bụ dike?
Emechara m ntuli aka a n’Igbo, asụsụ ndị nna nna m, n’ihi na ọ bụ naanị ndị Igbo ka e mere ntuli aka ahụ. Dika m tụrụ anya ya, imirikiti ndị zara ya, pasent iri asaa, kwenyere na Okonkwo bụ dike. mu onwem, ọ na atam echiche
Akwụkwọ abụọ Chinua Achebe dị ezigbo mkpa nye ndị Igbo n’ihi na ha bụ ihe kacha dịrị anyị nso na ndekọ ederede akụkọ ihe mere eme banyere ntụzịaka anyị dịka ndị mmadụ na mbido narị afọ nke iri abụọ. Ntọala akwụkwọ Things Fall Apart tinye ya na njedebe nke narị afọ nke iri na iteolu, n’ihe dịka oge ndị nwoke dịka TE Dennis na Carlos Zappa na-agbanye mgbọrọgwụ na mkparịta ụka Osimiri Anambra-Niger. Onye dike nke Things Fall Apart, Okonkwo, bu onye a na-akwanyere ugwu nke oma, ma nwee oganihu n’ulo Umuofia. Dị ka mmadụ ji aka ya mee, ndị ikwu ya lere ya anya. Ọ dị ike ọrụ, nwee obi ike, ma nwee amamihe, bụrụkwa nwoke. nke ndị Igbo na-asọpụrụ. A ga-ahụ mbuli ụdi agwa n’ilu Igbo, Mgberede nyiri dike, mana mgberede ka eji ama dike. N’ụzọ bụ isi, mgbe ị chere ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume, ị ga-achọ àgwà anọ ndị a iji merie, ozugbo ị gosipụtara onwe gị, ndị anyị na-efe gị ofufe n’ụzọ pụrụ iche.
Okonkwo nwere àgwà anọ a na ụzọ di iche iche. Mana, n’ikpeazụ, o gburu onwe ya. Okonkwo nwere otu ihe ọzọ, ihe na-ewute ndị Igbo rue taa.
RELATED POSTS: An Epiphany Called Oduduwa Republic
Ọ bụ nsogbu ochie, m ga-akpọ ya ọrịa Okonkwo. Lee I na-ahụ, n’ọtụtụ ajụjụ ọnụ, Prọfesọ Achebe mere ka o doo anya na ọ tụleghị ihe okike ya dị ka dike, ọ bụ ya mere o ji tinye ọtụtụ mmejọ agwa. Ihe kachasị mkpa n’àgwà ndị a n’echiche m, ọ bụ ọdịdị Okonkwo. Nke a mere ka ọ bụrụ onye ọchịchị aka ike, nke a abụghị ihe ejiri mara ndi Igbo. Onye na-eme ihe ike anaghị agbagha esemokwu, ọ na-adịkwa ngwa ime ihe ike. Ihe ndị a bụ ihe Okonkwo mere, ndị a bụ ihe anyị na-ahụ n’ala Igbo taa.
Ọ na-ekwu na ọtụtụ ndị Igbo nakweere Okonkwo dị ka dike, mana ọ dị mfe ịhụ na ihe gbasara “obi ike” ya na-enweghị atụ na-apụta na mkpokọta mmekọrịta anyị ‘“nzogbu nzogbu”. Anyị nwere oke mmetụta uche na enweghị nghọta n’ụzọ anyị si eme ihe, ọ gosipụtara na mmekọrịta anyị na ndị agbata obi anyị. Ndị kacha nọrọ anyị nso na Niger Delta, ha na elee anyị anya na enweghị ntụkwasị obi. Ndị nọ anyị ebe dị anya, na-ele anyị anya na-asọ oyi. Ọbụna n’etiti onwe anyị, anyị anaghị akwụsị ịjụ ajụjụ bụ isi, “n’ihi gịnị?”
Kedu ihe kpatara ala Igbo jiri dị otu a? Gịnị kpatara na ọ naghị arụ ọrụ? Echere na anyị bụ ndị kacha mma na akụ na ụba na Nijeria, mana ọnụọgụgụ anyi na-akọ akụkọ dị iche. Ma mba, ọ dị oke nfe ịga n’ihu na-ebo agbụrụ ndị ọzọ ụta maka nsogbu dị n’ala Igbo.
Ilu ọzọ, si n’oké akwụkwọ nke abụọ Achebe, bụ nke a gwara Ezeulu: “I guzo n’ụlọ onye ụjọ iji tụọ aka mkpọmkpọ ebe nke ụlọ nwoke dimkpa”. Ilu ahụ, bụ ndụmọdụ ka anyị kpachara anya. N’ikpeazụ, lee anya tupu ịwụfuo.
RELATED POSTS: PDP Has Committed Political Suicide By Its Position On Zoning - Ohaneze Ndigbo
Ka anyị kwụsị ịdị ka Okonkwo na enweghị ntụgharị uche ya n’ihi na ọ na-eche na ọ dị mkpa igosipụta ụwa otu o si nwee obi ike. Enwere naanị otu nsonaazụ sitere na ịbụ Okonkwo. N’ikpeazu, n’agbanyeghi oke ihe oma ya, Okonkwo kwụgbụrụ onwe ya.
Previous articleIt’s Delusional To Think That Humans Can Turn To Animals — Witches Association
Next articleLagos Police Arrests 71 Fun-Seekers For Violating COVID-19 Protocols